Isidingo sokuguquka zemfundo eze ukuqaphela ukuthi imisebenzi ukuqeqeshwa kwezikhungo eziningi akukuniki umphumela oyifunayo, futhi ngemva zesikole nabafundi ncamashi esilinganayo ulwazi nge lwazo. Ukuze simazi kangcono le nkinga kudingeka babe nolwazi umqondo womsebenzi ezemfundo, izingxenye zalo kanye yokuthengisa in the yesimanje wehlelo lefundo zombelele.
umsebenzi Sikhungo - kungcono omunye wemizila ebaluleke kakhulu futhi main imisebenzi lomuntu ngamunye, umphumela lapho kubonakala khona ukuthuthukiswa kwamakhono entsha. Siqukethe izingxenye ezifana umsebenzi yokufunda, isinyathelo ezemfundo, ukuqapha isenzo kanye nokuhlola isenzo. Eqinisweni, imiqondo lawa algorithm ngawo ekufundeni isifika uqobo. Baningi othisha babe iminyaka ezinikele cwaninga lo mbuzo, indlela engcono ukwethula ulwazi abafundi ukuthi kungenzeka bangabizwa wakwamukela futhi kamuva bakwenze. Umkhuba main, okuyinto baletha kwaba iqiniso ukuthi kukhona kulula ukuqeqesha ontanga yabo. Kulokhu, abantu bobudala obufanayo nobazo musa nje kufanele egumbini ngesikhathi esifanayo, kodwa futhi ukuba nihlanganyele. Kuyinto ukubambisana kwazo ngeke iholele ekuzuzweni kwemiphumela eliphezulu comprehensibility kolwazi kanye isebenza umkhuba. Ngenxa yalesi sizathu, imisebenzi zemfundo abafundi ngokuvamile lihlotshaniswa imihlangano nezinkulumo noma izifundo zokuqeqesha lapho bangakwazi ukufunda amakhono amasha kanye nolwazi izifundo zabo, kanye nabo. Esikoleni, in junior ukubona ngokucacile isiqinisekiso yalesi sitatimende kungaba ekilasini, eyakhelwe isimiso yomdlalo. Kuyathakazelisa ukuthi uthisha kumele engangeneli elibonakalayo inqubo yokufunda, kodwa kunalokho khaphi them besekela ethembekileyo ithola abafundi bakhe kanye nokulungisa ulwazi yabo.
Traditional ukuqeqeshwa System ikhomba nokusebenza ngendlela ephansi. Njengakuwo wonke kweminyaka eminingi yocwaningo imfundiso senzeka ngendlela efanayo. Ngokuthakazelisayo, akukho kucatshangelwe noma umbandela yobudala abafundi, noma ubulili, noma ezenhlalo, noma psycho yabo. Eqinisweni, othisha kuphela ifomu ucishe kufinyeleleke ukunikeza abafundi ulwazi, okuyinto futhi ayikashintshi iminyaka eminingi, naphezu metamorphoses abaningi emhlabeni nasemphakathini. Ngamanye amazwi, akukho ukuthuthukiswa yokucabanga. Thuthukisa inkumbulo, ukukhuluma, kodwa hhayi ukucabanga, hhayi ikhono ukwakha uxhumano okunengqondo phakathi izenzakalo nabantu, kungekho isifiso sokuthola ulwazi.
Isethi ejwayelekile lwezinto okufanele sisifunde umfundi iminyaka ukuqeqeshwa, akusiyo lesilungele kukhula siqu. Ukuthuthukiswa yamakhono akhe, okuyinto ngenxa kungaba umsebenzi wakhe. Uma umfundi intshisekelo evelele ku humanities, kodwa ikhono sokwetshisa eyala lobuchwepheshe ngaphansi kwesilinganiso, kufanele namanje ukuqinisa yayo amandla, hhayi ngenkani ukuphoqelela kuye ulwazi kuyoba phezu kombundu isikhungo ngosuku ikhishwe khona.
Abanye othisha bakholelwa ukuthi imisebenzi imfundo ephakeme - umsebenzi self-yokufunda. Ulwazi ukuthi umfundi wathola bebodwa, kuyoba ngaye kakhudlwana futhi kucace kakhudlwana. Kodwa lokhu akusho ukuthi kungenzeka amnike umsebenzi futhi kule ukuqeqeshwa ephelele. Kunalokho, uthisha kufanele athuthukise kumfundi isifiso ukucinga izimpendulo zemibuzo, funda kabanzi kuka Nkulunkulu angakunika ezimbalwa amahora zezemfundo. Sivuse isithakazelo sakhe esikhulu kule ndaba, ungakwazi ukushintsha ukufunda okuzenzakalelayo ezinkulumo kanye wesikole Inkinga amakilasi non-standard, okuyinto ezizothinta izithakazelo umfundi. It zamnika ithuba ukuzizwa yenqubo, umhlanganyeli yayo egcwele, abanemibono akuyona ayibalulekile kunalokho sathishela.
Medicine "Nolpaza": yokusetshenziswa